Rikoooo A380 kaatuu P3D v3.4
mubvunzo Rikoooo A380 kaatuu P3D v3.4
1 gore 9 ago #572 by acccro14
Ndine dambudziko Rikoooo A380. Unfortunatly, kana nditamire kamera nokukurumidza, P3D hunomira kuteerera. Kuti hazviitiki nevamwe ndege. Mumwewo vane dambudziko iri?
1 gore 9 ago #579 by Gh0stRider203
Handina yakadzikiswa mumwe crashbus muna Mwari anoziva sei refu, saka handisi kukwanisa kubatsira zvikuru pamusoro. Ndinovimba mumwe munhu vauya kuti anozvigona. Plus maitiro wangu asingadi chaizvo sokuti kufanana P3D elnaz
Time chokusika peji: 0.123 mumasekonzi